Hadalka Muujinaya In Manchester United Qabsan Doonto Horyaalka Premier League & Champions League Ee Kasoo Yeedhay Professor-ka Kubadda Cagta Ee La Magacaabay - Laacib
HomeWararka CiyaarahaHadalka Muujinaya In Manchester United Qabsan Doonto Horyaalka Premier League & Champions League Ee Kasoo Yeedhay Professor-ka Kubadda Cagta Ee La Magacaabay
Hadalka Muujinaya In Manchester United Qabsan Doonto Horyaalka Premier League & Champions League Ee Kasoo Yeedhay Professor-ka Kubadda Cagta Ee La Magacaabay
Manchester United ayaa nasiib u yeelatay inay tababaraheeda cusub ka dhigato, shaqsiga la isku raacsan yahay inuu ikhtiraacay xeeladda kubaddeed ee guulaha ku suntan ee cidhiidhiga, joogsi la’aanta, orodka iyo illaa dhamaadka la dagaallamo xataa iyadoo goolal badan lagu leeyahay.
Sumcadda uu adduunyada ku leeyahay waxa uu ku mutaystay naanaysta ah ‘Professor-ka kubadda cagta’, waxaana ardaydiisa ah oo wax ka bartay Jurgen Klopp iyo Thomas Tuchel oo guulo ku hoggaamiyey Liverpool iyo Chelsea.
Fikradaha ciyaareed ee maskaxdiisa kasoo maaxda, Ralf Rangnick waa kuwo laga faa’iidaysto, waxaana uu duruus la xidhiidha aragtidiisa kubadda cagta iyo aqoonta qotoda dheer ee ka baxsan laadka iyo ciyaarista, uu kusoo bandhigay telefishano barnaamijiyo ka sameeyey.
Manchester United ayaa markii ay daraasaynaysay Ralf Rangnick, waxay dib ugu noqotay taariikhdiisa, waxaanay ku qanacday inuu yahay shaqsiga ay waqtigan u baahan yihiin, iyaga oo ka leexday Ernesto Valverde oo la sheegayay inay wada-hadallo kula jiraan.
Inkasta oo uu lix bilood maamulayo kooxda, haddana waxa la rumaysan yahay, in Ralf Rangnick uu Manchester United u samayn doono qaab-ciyaareed u gooni ah oo ay ku dhegsanaan doonaan, halka hadda aanay lahayn qaab loogu soo hagaago, sida Man City oo isku-dhiib iyo tiki-taka ku ciyaarta ama Liverpool oo cidhiidhsi iyo cadaadis ay saaraan kooxaha kale caan ku noqday intii uu Jurgen Klopp joogay.
“Maxay tahay shaqada tababaraha ama maamulaha kooxda?” Su’aashan ayuu Ralf Rangnick weydiiyey tababareyaasha adduunka, shirweynihii sannadkan oo codkiisa ay tababareyaal waaweyni aad ugu dhaygageen.
Sharraxaadda uu ka bixiyey weydiintan ayaa noqotay mid ka mid ah hadallada uu Ralf Rangnick ku kasbaday quluubta Manchester United ee ay ugu dhiibtay shaqadan.
Jawaabta fudud ee uu ka bixiyey su’aashan ayaa ah waxay u baahan tahay Manchester United inay hesho, waxaana uu yidhi isaga oo sharraxaya waxa ay tahay shaqada tababaruhu: “In aan aragti caddaan ah ka lahaado, sida ay kooxdaydu u ciyaarayso ayaa ah shaqada tababaraha.”
Isaga oo hadalkiisa sii wata waxa uu yidhi: “Tani waxay noqon kartaa sida qaab-ciyaareedka Pep Guardiola ama Diego Simeone ama Jurgen Klopp oo kale. Waxa ay dhamaantood ka midaysan yihiin, waa inay garanayaan nooca kubadda cagta ee ay doonayaan in kooxdoodu ciyaarto amaba sida ay u ekaanayso. Maskaxdooda ayay ku haystaan Muuqaallo daawasho ah oo la xidhiidha sida ugu fiican ee ay tahay inay u ciyaaraan.
“Shaqada tababaraha kubadda cagtu, waa in uu soo gudbiyo fikiradihiisa la xidhiidha kubadda cagta ee ku jira maskaxdiisa, kuna shubo quluubta ciyaartoydiisa iyo xididdadooda dhiigga.”
Qaabka sharraxaad ee uu Ralf Rangnick uga jawaabay shaqada tababarenimo, waxay muujinaysaa in Manchester United ay yeelan doonto qaab-ciyaareed u gooni ah oo lagu baran doono, sida Liverpool, Man City ama Atletico Madrid.
Chelsea muuna sheegin
Xaasid waay Chelsea ayu kaso horjeda blues 4 ever
Ahmed Nuur Caddaawe says:
Chelsea uma baahan in lasheeg sheego iyo xayeeysiis, iyadaa cidwalbaa oo kubadda daawata is jecleysiineyso 😊
kkkkkkk reer chelsea durba ma cabsateen cabaad kiinaa baxayee
Taariikhda Manchester United iyo liverpool oo kale Chelsea malaha, 2005 tii wixii ka danbeeyay ayaa la odhankaraa inay noqotay koox wayn oo wax laga filan karo markii uu jose macalinka unoqday, marka ree blues buuqa yaraysta taariikhbaa wax lagu helaaye